हावाहुरीसहित वर्षा,सर्तक रहन आग्रह
उपत्यकामा ६४७ कोरोना संक्रमित थपिए
राप्रपामा यस्तो सहमति
संबैधानिक निकायमा पदपूर्ति गर्न प्रधानमन्त्रीलाई पार्टी सचिवालयको निर्देशन
डा. चन्द्र भण्डारीद्धारा निःशुल्क खाना खुवाउन सहयोग रकम हस्तान्तरण
त्यसैले रक्सी खान पर्छ
'मान्छे जति देखिन्छ त्यति मात्र हुँदैन'
जीवन र लक्ष्मीको निर्देशनमा 'तिमी सित माया गर्दा' को म्युजिक भिडियो सार्वजनिक
शनिबारको दिन थियो ।
म झ्यालमा बसेर अखबार हेर्दै थिएँ । एक्लै थिएँ म डेराको कोठामा । खास खबर केही थिएन अखबारमा । खोज्यो भने बजारमा प्रायः नभेटिने खालको पत्रिका हो यो । पत्रकार मित्रले उपलब्ध गराएको पत्रिकामा के नै हुन्थ्यो । तैपनि एक प्रकारको आलस्यले गर्दा त्यसमाथि आँखा गाडिरहेको थिएँ ।
धारामा पानी आएको छैन । त्यसैले नुहाउने कुरा पनि आएन ।
झ्यालमै बसेर हेर्न थालें बाहिर । म यो घरको सबभन्दा माथिल्लो तलामा होइन, त्यसभन्दा एक तलामुनि बस्छु । अगाडि फोहर चोक छ । त्यही फोहर चोक भएर हिंड्नुपर्छ मैले । अतः त्यहाँका कतिपय कुराहरुसँग मेरो पनि सरोकार रहेको हुन्छ ।
शनिबारको चोक अरु दिनको दाँजोमा खासै अन्तर छैन ।
पट्यार लागेर सुत्ने विचारले जसै म उठ्न खोजें झ्यालबाट । पल्लो घरकी एउटी बूढीले मलाई एकैछिन रोकी ।
ए बाबू , कति बज्यो हँ ?
मैले घडी हेरेँ ।
बाह्र बज्नै लाग्यो ।, मैले भनेँ ।
कम्तीमा दिनको एक पटक मसँग त्यो बूढी आइमाई समय सोध्ने गर्छे । मलाई थाहा छैन यो उमेरमा समयको जानकारी कत्तिको आवश्यक छ ।
त्यस बूढीको नाति आफ्नो कोठामा बसेर अहिले क्यासेटमा हिन्दी गीत घन्काएर नाच्ने अभ्यासमा लागिरहेछ । एकैक्षणमा अब चोक घन्कन बेर छैन । त्यस आवाजले बूढी कान थुन्दै भगवान्को पुकारा गर्न थाल्छे ।
उच्चाट लागेर आयो । सुत्ने मन त छ तर सुतें भन्देखि जीउ अझ आलस्यको पोको हुन थाल्छ । त्यसैले सुत्ने विचार छोडेँ ।
म बीचबीचमा बार्दली गाँसिएको छेउको घरमा दृष्टिपात गर्दै छु । भन्ने हो भने घर – बार्दलीसँग मेरो कुनै तादात्म्य छैन । कुनै लेनदेन पनि छैन । त्यहाँ गहिरिनुपर्ने त्यत्रो ठूलो कुरो पनि छैन । तैपनि फुर्सद भयो कि त्यहाँ अलिबेर आशाकुति भएर हेर्ने गर्छु । अलिबेर आँखालाई त्यतातिर बिछ्याउने गर्छु । यो मेरो एक प्रकारको बिहान उठेर दाँत माझ्नु , हातमुख धुनु जतिकै दैनन्दिन विषयका सामान्य आवश्यकताभित्र पर्दछ ।
त्यस बार्दलीमा प्रायशः एउटी केटी देखिने गर्छे – कोपिलाबाट फुल बन्ने क्रममा लागेकी । उमेर मुस्किलले चौध– पन्ध्र होला । उमेरको हिसाबले बैँस अलि छिट्टै फुलेको छ । केटी भर्खर उफ्रन जानेको बाछी जस्ती अथवा भर्खर उड्न सिकेकी बचेरीजस्ती छे । केटी कहिले गुनगुनाउँछे, कहिले कौसीमा गएर आकाश हेर्छे । एकैछिनमा चोकमा पुग्छे । घरीघरी उसलाई आफ्नो बसाइ फेरिरहनुपर्छ ।
कहिलेकाहीँ मलाई उदेक लाग्छ त्यसको चुलबुलेपनदेखि ।
म कोठामा हुँदा त्यतातिर अलि गहिरिएर हेर्ने गर्छु । त्यस हेराइमा कुनै रतिरागको तरंग छ जस्तो मलाई कहिल्यै भएन । म एक प्रकारले त्यसको किशोरवयका चञ्चलताहरु, अबोधता हेर्न मन पराउँथें । त्यसको अनुहारबाट टप्किने निश्छलता चित्ताकर्षक थियो ।
तर आज त्यहाँ केटी देखिएकी छैन ।
फिल्म हेर्न गई कि !
केटाको कोठाबाट बजेको डिस्को म्युजिक चोकमा फैलिरहेछ । चोकको एउटा कुनामा दुई जना स्वास्नीमान्छेहरु आपसमा वार्तालाप गर्दै छन् । अलि पर एउटी सुत्केरी आइमाई इचा (नवजात बच्चाको फोहर पुछ्ने) धोइरहेकी छे ।
केटाले क्यासेटमा डिस्को म्युजिक झिकेर अर्को गीत बजायो । अर्को केटो किताबमा आँखा गाड्दै बीचबीचमा केटी देखिने झ्याल र बार्दलीतिर आशातीत दृष्टि दिंदै छ ।
बार्दली अझै एकान्त छ ।
केटी भएकी भए यतिखेर क्यासेट बजाउने केटोसँग गफ गर्दै होली – लभस्टोरीको गीत बजाऊ न ।
केटीको फरमाइसमा केटो मक्ख पर्दै भनेकै गीत बजाइदिन्थ्यो ।
तिमीले दबंग हे¥यौ ?
अहिले हो र ।
अनि कोहीनुर नि ?
त्यो पनि हेरें ।
तिनीहरु फिल्मकै बारेमा बढी कुरा गर्थे । मानौं अन्य कुरा जिन्दगीमा अत्यन्त गौण छन् ।
मलाई अचम्म लाग्छ । सिनेमाका कपोलकल्पित एवं नाटकीय दृश्यहरुमा कति मग्न हुनसक्या , फिल्मकै परिदृश्यहरुमा कसरी आफूलाई भुलाउन सक्या, जबकि आँखासामुको जिन्दगी त्यसभन्दा ज्यादै भिन्न छ ।
एकदिन त्यही केटी आमासँग बाझिरहेकी थिई । केटीले सायद फिल्म हेर्न पैसा मागेकी थिई अथवा हुन सक्छ आफ्नो कुनै आवश्यकता पुरा गर्न ।
किन चाहियो तँलाई त्यतिका पैसा ....?
पर्दैन जान, चोरेर ल्याएको धन छैन तेरो बासित ।
अरुले भने कति ल्याउँछन् हामीलाई लाज हुँदैन ?
तँलाई अरुको देखासिकी गर्नुप¥र्यो हैन ? अरुले हात्ती चढ्यो भन्दैमा तँ के पर्खाल चढ्छेस् ?
तैपनि ऊ कहीँ न कहीँबाट आफ्नो आवश्यकता पुरा गर्थी । नयाँनयाँ फेसन लाउँथी । जतिपल्ट झ्याल वा बार्दलीमा देखापर्थी उतिपल्ट पहिरन पनि फेरिएको हुन्थ्यो । उसको पहिरन फेराइबारे मेरो ध्यान त्यस बेला मात्र गयो जब मकहाँ एउटा साथी केही घण्टा बसेर गयो । त्यसले पो मलाई यस कुराको सुइँको दियो । तीन– चार दिन मैले पनि ध्यान दिएँ । कुरो हो रहेछ । तर चार पाँच पटकपछि पहिरन पुनः दोहोरिन्थ्यो ।
भात खाएर डेरामा फर्किंदा नौ बज्न लाग्दैथ्यो । एकछिन किताब हेर्न बसें । मेरा दृष्टिहरु किताबमाथि नै थिए । यसै बेला पल्लो घरबाट केही गनगन तथा खबलबलजस्तो सुनियो । कुनै स्वास्नीमान्छे सुँकसुँकाएको जस्तो सुनें । मैले खास चाख देखाइनँ । चोकको हाल यस्तै हो । हाँसो, रोदन एवं रडाको घरभित्रकै अंग हुन् ।
म सुतें ।
मलाई आज के भो थाहा छैन । तर सपनामा मैले त्यस किशोरी केटीलाई भेटेँ– कहीँ जान सजिएर आएको अवस्थामा नजिकैबाट उसलाई हेरेँ । कोपिलाको अवस्था लुप्तप्रायः थियो । वास्तवमा त्यो मसँग कुरा गर्न आएकी थिई ।
किन ?, मैले सोधेथें ।
त्यो हाँसी ।
दाइलाई हिरोमा को मन पर्छ ?
उसको सोधाइले म छक्क परें ।
मलाई त सलमान मन पर्छ, दाइ चिन्नुहुन्छ ?, उसले भनी ।
अनि रितिक ...अभिषेक .. ?
मैले नकारमा टाउको हल्लाएँ ।
नेपाली हिरोमा को मन पर्छ ?, मैले पनि सोधें ।
शिव श्रेष्ठ, राजेश हमाल, ... ।
तिमी यीमध्ये कोसँग पाए बिहे गर्न मन पराउँछ्यौ ?
म त कुनै पनि हिरोसँग बिहे गर्न चाहन्छु ।, यति भनेर हाँस्दै दृश्यफलकबाट भागी त्यो केटी ।
बिउँझंदा पनि म छक्क परें । एकछिन त म रनभुल्लमा परेँ । त्यो केटी किन सपनामा आई ? यस कुराले पनि म अचम्मित भएँ ।
झ्याल खोलेँ । अलिकति उज्यालो कोठाभित्र छि¥यो । घाम धेरै लागेको थिएन ।
मुख धुन धारामा जाँदा घरबेटीले मलाई भनी – थाहा पाउनुभयो बाबु ?
के आमै ?, म आमै भन्ने गर्छु घरबेटीलाई ।
त्यो नक्कली त भागिछ ।
नक्कली अर्थात् त्यही किशोरी केटी ।
खै , के थाहा ।, घरबेटी गाग्री बोकेर भ¥याङ उक्लन थाली ।
कताकता मलाई च्वास्स घोचेजस्तो भयो । समयभन्दा अपरिपक्व केटी । विचारभन्दा सानी केटी । कुन केटोमा उसले शिव श्रेष्ठ, सञ्जय दत्त वा अनिव कपुरको झल्को पाई ? त्यसो आगामी जिन्दगी .. । त्यसप्रति मेरो मनमा टीठ पलाएर आयो ।
म लगभग विमूढ अवस्थामा कोठामा आएँ । आँखामा त्यही केटीको अबोध अनुहार नाच्न थाल्यो । झ्यालबाट त्यसको घर हेरेँ । घर शून्यजस्तो लाग्यो । झ्यालहरु खुलेका थिए तर पर्दाहरु खुलेका थिएनन् ।
डिस्को बजाउने केटाको कोठामा गीतका कुनै हरफहरु छैनन् । हातमा किताब च्यापेर बस्ने केटो पनि आज झ्यालमा छैन ।
यस बेला सामुन्नेको घरबाट त्यही बूढी निस्की र सोधी – कति बज्यो बाबू ?